Xiisad iyo jahwareer Ruushka iyo Mareykanka oo kadhashay kiimikadii lagu weeraray Suuriya – Radio Daljir
Xiisad iyo jahwareer Ruushka iyo Mareykanka oo kadhashay kiimikadii lagu weeraray Suuriya
Abriil 10, 2018 6:21 b 0
Dowladda Mareykanka ayaa ku goodisay inay tilaabo militari kaga falcelin doonto weerarka Suuriya, halka Ruushka uu sheegay inay cawaaqib ka dhalan doonto hadalada kasoo baxaya maamulka Trump.
Erayo hor leh oo xiisado hor leh abuuraya ayaa kasoo baxaya maamulada Washington iyo Moscow, taasi oo ka dhalatay weerarka oo adeegsaday hubka kiimikada ee lagu qaaday magaalada mucaaradka ee ay maamulaan ee Dooma ee u dhow caasumadda Suuriya ee Dimishiq.
Dowladaha Mareykanka, Britain, France iyo lix dal oo kalle ayaa codsaday Golaha Ammaanka ee QM fadhi degdeg ah oo uu ka yeesho weerarka kiimikada ee Suuriya oo la sheegay in loo adeegsaday gaaska Cholorine-ka ah, waxaana ku geeriyooday dad ka badan todobaadtan qof, iyadoo boqolaalna ay la jiifaan, kuwaasi oo ah dadka ugu badan ay waxyeeladu soo gaartay haween iyo carruur.
Xukuumadda Suuriya ee Bishaar Al-asad iyo xulafadiisa Ruushka ayaa been abuur ku tilmaamay eedaymaha loo soo jeediyay ee ah inay adeegsadeen hubka kiimikada.
Wakiilka dowladda Mareykanka ee QM Nikki Haley ayaa kulanka degdega ee QM ka sheegtay inay dowladda Mareykanka ay diyaar u tahay inay ka jawaabto, go’aanka uu golaha Ammaanka ee QM ka qaato weerarka, iyadoona sheegtay in la joogo waqtigii caalamka uu arki lahaa cadaaladda.
Heley ayaa sheegtay QM inay diiwaanka ay u geli doonto taariikhda , haddii Golaha Ammaanka uu iska indho tiro weerarka iyo haddii uu muujiyo masuuliayaddiisa, si loo difaaco shacabka Suuriya.
Madaxwaynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay jawaab culus inay ka bixin doonaan weerarka hubka ee la adeegsaday, isagoo sheegay inay horyaaliin inay qaadaan talaabooyin militari, waxaana intaasi ku daray inay qaadi doonaan 24-48 saacadood gudahood.
Dagaal culus oo kasocda Muqdisho
DP World oo dowladda Jabuuti u digtay